Dhibaatada ka jirta Suudaan: Dibadbaxayaasha markii ugu horeysay ee ka horreeya xarun ciidamada - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA Dhibaatada ka jirta Suudaan: Baqdiyayaal markii ugu horeysay ee ka horreeya xarumaha ciidanka - JeuneAfrique.com
Kumanaan ka mid ah Sudan socotay sabtidii ee Khartoum, dibad badan oo gaarey gaaraan xarunta ciidanka markii ugu horeysay tan iyo bilowgii dibad anti-dowladda waxaa ku dhowaad afar bilood, sida uu sheegay markhaatiyaal.
Wax ka qabashada call a ka Alliance for xorriyadda iyo isbedelka, hormuudka dibad, kumanaan ka mid ah dibad isugu soo baxay waddooyinka ee Khartoum ku dhawaaqayay "mid ka mid ah ciidanka, mid ka mid ah dadka" iyo dalbadeen bixitaankii Madaxweyne Omar el - Awood, koronto tan iyo sannadkii 30.
Kulamadii horedibad-baxayaasha ayaa si isdabajoog ah isugu dayay in ay ku dhaqaaqaan meelo awood leh, sida madaxtooyada madaxweynaha, laakiin marar badan ayaa looga hortagay ciidamada ammaanka oo gaaska gooyay.
Markii ugu horreysay Sabtidii, dibadbaxayaal ayaa gaaray xarunta dhexe ee ciidamada, markhaatiyaal ayaa sidaas sheegay.
Magaalada caasimada ah, dibad baxayaashu waxay ku dhawaaqeen "Nabad, Cadaalad iyo Xorriyad"
Wax yar ka hor inta aan la bilaabin dibad-baxyada, ciidamada ammaanku waxay hawlgalo ku qaadeen Khartoum iyo Omdurman.
"Qalabka ammaan ee muhiimka ah ayaa la dhigay meel u dhow goobtii la qorsheeyay, laakiin dibad-baxayaashu waxay u baxsadeen waddooyin kala duwan iyagoo ku booriyay xukuumadda ka soo horjeeda xukuumadda," ayuu yiri markhaati ah xaalad aan la aqoonsanayn.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in ay arkeen saraakiil cad oo isku dhaf ah si ay dadku isugu dhajiyaan si ay u sii wataan dad soo gudbey-iyada oo gaari doona bartamaha magaalada.
Khartoum dukaamada iyo suuqyada ayaa amar lagu siiyay in ay xiraan ka hor inta aysan dibad-baxyada, sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah.
Magaalada Madani, koonfur bari ee Khartoum, dibadbaxayaashu waxay gaareen dhismaha ciidanka, markhaati uu ku sheegay telefoon.
Tan iyo markii la aasaasay xaaladda degdegga ah ee Omar al-Bashir ee 22 FebruaryDibadbaxyo ayaa inta badan ku yaal caasimadda iyo magaalada deriska, Omdurman, laakiin sabtida ayaa qabanqaabiyayaasha dibad-baxa ayaa ku baaqay in dib loo soo doorto dalka oo dhan.
Taariikhda doortay waa calaamad sida guuradii ee kacdoonka ee April 6 1985, kuwaas oo ka caawiyey rido dawladda ee markaas madaxweynaha, Jaafar al-Nimeiri.
Maalmihii ugu dambeeyay, dhaq-dhaqaaqayaasha ayaa daabacday waraaqo si ay ugu baaqaan dibad-baxyo, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Baaxad aad u culus, aadanaha
Xayiraadda 19 2018 ayaa go'aamisay go'aanka xukuumadda ee ku aaddan kicinta qiimaha rootiga, dibad-baxyada si dhakhso ah ayey u noqdeen dhaqdhaqaaq mudaaharaad ka dhan ah Omar al-Bashir.
Tan iyo abuuritaanka xaaladda degdegga ah on February 22, dhowr dibad ayaa la xiray ka qayb-baxyada la fasaxin oo isku dayay by maxkamadaha gaarka ah halka xad iyo xoojinta of dibad maratay .
Tan iyo bishii Diseembar, NISS ayaa xiray boqollaal mudaaharaadayaal ah, hoggaamiyeyaal mucaarad ah, dhaqdhaqaaqayaal iyo suxufiyiin, sida ay sheegtay NGO-yada.
Sida laga soo xigtay warbixinta rasmiga ah, dadka 31 ayaa dhintey tan iyo bilowgii dibad-baxyada. NGO-ga Human Rights Watch (HRW) wuxuu ka hadlayey tirada shakhsiyaadka 51 dhintay.
[Tribune] Rwanda shan iyo labaatan sano ka dib markii rafaadka - JeuneAfrique.com